Proverb Ampemby : antitra vao mitsiky vazana. [Veyrières 1913 #1799, Cousins 1871 #150]
Proverb Antidahin-dambo, antitra am-pandrembezana. [Samson 1965 #A85]
Proverb Antitra manara am--pandriana: mivoady ny masoandro hiseho. [Veyrières 1913 #1803, Cousins 1871 #247]
Proverb Avelao ho antitry ny ditrany izy. [Veyrières 1913 #6342]
Proverb Aza manao toy ny voavahy : tanora, manani-kazo ; antitra, vao mikorintsana. [Veyrières 1913 #1807, Cousins 1871 #528]
Proverb Ditran' antitra. [Veyrières 1913 #6399]
Proverb Izay mandroboka indroa manana antitra. [Veyrières 1913 #5268]
Proverb Ketsa va aho ka ho antitra iray taona? [Houlder 1895 #820, Cousins 1871 #1260]
Proverb Korodona an’ i Boso ; antitra mahefa. [Samson 1965 #K27]
Proverb Lahiantitra manao lelik’ asa ka mosaren' ny hafetseny. [Rinara 1974 #1674, Houlder 1895]
Proverb Malaina hatry ny fahazaza, ka ory mandraka antitra. [Rinara 1974 #1926]
Proverb Manampontsampona hoatry ny fatin' antitra. [Veyrières 1913 #1830]
Proverb Mandalo dia raikitra ohatra ny tsipolitra antitra. [Rajemisa 1985]
Proverb Miara-monina amim-pahalainana fahazaza, ka mitafy voro-damba efa antitra. [Veyrières 1913 #1576]
Proverb Mihena an-toerana karaha fen’ antitra. [Samson 1965 #M112]
Proverb Mitabataba hoatry ny voanjo am-bavan' antitra. [Veyrières 1913 #1839]
Proverb Ny antitra antitra ihany. [Veyrières 1913 #1844]
Proverb Ny ditra maha-kely antitra. [Veyrières 1913 #6373, Cousins 1871]
Proverb Rakitr' antitra. [Veyrières 1913 #2324]
Proverb Resak' antitra. [Veyrières 1913 #1853]
Proverb Sahala amin' ny voatavo : antitra vao avadiky ny sasany. [Veyrières 1913 #1854]
Proverb Sifotra antitra aho, ka tsy maha-reny vorona anao. [Houlder 1895 #1945]
Proverb Sifotra antitra, ka tsy mahangeza renivorona. [Cousins 1871 #2886]
Proverb Sifotra antitra ka tsy maha-renivorona. [Rinara 1974 #3873]
Proverb Sondraran’ antitra : ianin’ ny taloha. [Samson 1965 #S56]
Proverb Taizan' antitra. [Veyrières 1913 #1860]
Proverb Tanalahy manani-bero : antitra mijaiko, tanora mijaiko. [Veyrières 1913 #1711, Cousins 1871 #2993]
Proverb Tanora tsy kinga, ka antitra vao misanitika. [Veyrières 1913 #1863]
Proverb Tanora tsy nanao na inona na inona, ka nony antitra : mipitrapitra. [Rinara 1974 #4068]
Proverb Tavin-kena am-bavan' antitra, ka lasa tsy antonon-tonony (mbola tsy re ny tsirony). [Rinara 1974 #4115]
Proverb Toy ny fanoto: antitra vao kely anarana. [Houlder 1895 #1942, Cousins 1871 #3191]
Proverb Toy ny vero : tanora mandimandina, antitra main-dambana. [Rinara 1974 #4376]
Proverb Tovony manaja tanana, ka antitra vao be fitsiriritana. [Rinara 1974]
Proverb Tsy hita hatanorana ohatra ny tana : tanora midreho, antitra midreho. [Rinara 1974]
Proverb Tsy ny firongarongan' ny voalavo fa ny faha-kely antitry ny totozy. [Rinara 1974]
Proverb Valalanamboa : mandadilady mandrak' antitra. [Rinara 1974 #4839]
Proverb Voatelina tsy satry, hoatry ny tavin-kena am-bavan' antitra. [Veyrières 1913 #1870]